Mamorona faritra vokatra ivelany vaovao
Tamin'ny Mey of 2020, The Besttone co., Ltd dia nanangana departemanta vaovao- Sampana vokatra fiarovana ivelany. Manomboka ny fikarohana ary mampivelatra ireo vokatra fiarovana ivelany. 20 taona lasa izay, The Besttone dia nitombo ho orinasa lehibe sy feno ary matotra amin'ny fikarohana akanjo sy ...
Voakasiky ny toe-javatra manerantany momba ny valanaretina coronavirus vaovao, ny orinasa dia manomboka manao sarontava fikarohana sy baiko misaron-tava ny vokatra haingana, mba hanao ny ezaka ataontsika manokana ho fisorohana ny valanaretina. Hatramin'ny faran'ny taona 2019 dia niseho ny valanaretina coronavirus vaovao marobe (antsoina hoe COVID-2019) i Shina, izay ...
Ny orinasa Besttone manokana dia natsangana ary napetraka tamin'ny famokarana
Tamin'ny 2017, ny orinasa Besttone manokana dia natsangana ary napetraka tamin'ny famokarana. Ny orinasa dia manana mpiasa maherin'ny 500, ao anatin'izany ny mpitantana 7, teknisiana 30 ary mpiasa manjaitra 380 tena tsara amin'ny tsipika famokarana. Izy io koa dia manana atrikasa famokarana tsy miankina marobe, toy ny fanaovana-lamina, fanapahana, zaitra, finis ...